Vaovao - Kodiaran'ny kaopy diamondra roa andalana
Kodiaran'ny kaopy diamondra roa andalana
Raha ny momba ny kodia fikosoham-bary ho an'ny simenitra, mety ho eritreretinao kodiarana kaopy turbo, kodiaran'ny kaopy zana-tsipìka, kodiarana kaopy andalana tokana sy ny sisa, anio no hampahafantatra kodiarana kaopy misy andalana roa, dia iray amin'ireo kodiaran'ny kaopy diamondra mahomby indrindra amin'ny fitotoana gorodona simenitra. Amin'ny ankapobeny ny habe mahazatra novolavolainay dia 4″, 5″, 7″, grits 6#~300# dia azo atao, ny haavon'ny fizarana dia 5mm, amboarinay ny fatorana samihafa amin'ny zavatra fitotoanao. Ny connectors arbor ankapobeny dia 22.23mm, M14, 5/8″-11.
Ho fanampin'izay, jereo azafady ny endri-javatra fanampiny amin'ny kodiarana kaopy misy laharana roa toy ny eto ambany:
Mora ny miasa: diamondra fikosoham-bary dia mora ny miasa sy ny fametrahana, izay mety ho an'ny grinders sy zoro grinders; Araho azafady ny torolàlana momba ny fampiasana ny angle grinders sy grinders mandritra ny fampiasana mba hisorohana ny loza
Fahombiazan'ny fametahana haingana: amin'ny haavon'ny 5 mm, ny mpankafy andalana roa brazed dia natao ho an'ny fikosoham-bary haingana sy malefaka, na ho an'ny fampiasana mando na maina, ny kodiaran'ny diamondra miaraka amin'ny famolavolana lavaka rivotra dia afaka manampy amin'ny fitazonana sy fampangatsiahana ny lamina manapaka mba hampihenana ny fitafy. , fanatsarana ny fahombiazan'ny asa
Ampiasaina betsaka: ireo kodiaran'ny fikosoham-bary ireo dia mety amin'ny karazana vato isan-karazany, izay azo ampiharina amin'ny fikosoham-bary maina na mando ny simenitra, granita, marbra, taila seramika, masonry ary fitaovana fanorenana hafa, manalefaka ny faritra tsy mitongilana ary manala tselatra.
Matanjaka sy mafy orina: vita amin'ny vatana vy vita amin'ny hafanana ary diamondra avo lenta, ireo kodiaran'ny diamondra fitotoana ireo dia harafesina ary mahatohitra ny harafesina, tsy mora simba, manala haingana ny fitaovana.
Ny fifantohana diamondra avo ho an'ny fiainana lava sy ny fanesorana fitaovana mahery vaika
Famolavolana fizarana bebe kokoa noho ny kodiaran'ny kaopy mahazatra izay mamela azy hanana androm-piainana lava kokoa
Mampiasà teknolojia mandanjalanja mavitrika ho an'ny kodiaran'ny kaopy, mba hahafahany mitazona fifandanjana indray mandeha eo ambanin'ny toe-javatra mihodina haingana.
Misy karazana fifandraisana isan-karazany mba hifanaraka amin'ny angle grinders
Raha te-hahafantatra bebe kokoa kodiaran'ny kaopy diamondra hafa ianao dia jereo ny tranokalanay www.bontai-diamond.com.